काठमाडौं । आहारा नै स्वास्थ्य हो । खानपानले विभिन्न रोग निम्त्याउँछ भने केही रोग निको पार्न वा लाग्न पनि दिँदैन । यसर्थ खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । स्वस्थ रहन खानपानमा...
काठमाडौँ, २ चैत- मानिसका जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नेपालमा हृदयाघातका बिरामी बढिरहेका छन् । अस्वस्थ खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन रोगका कारक मानिएका छन् । दश वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हृदयाघात हुनेको...
घामले छाला डढाएर तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी काँक्रोको प्रयोगले शितलता प्रदान गर्छ
कांक्रो स्वादिलो तथा रिफ्रेशिङ तरकारी हो । यसको प्रयोग सलादमा धेरैनै गरिन्छ । र धेरै मानिसहरुलाई कांक्रो खान मन पर्छ किनकि यसले रिफ्रेशिङ प्रदान गर्नुका साथै यसम अत्यधिक मात्रामा पोषण तत्व लुकेको...
स्वादमा तीतो हुने भएकोले धेरैलाई करेला मन नपर्न सक्छ । करेलामा धेरै प्रकारका गुणहरु छन् । परम्परागत चिकित्साको रुपमा करेला अत्याधिक प्रयोग हुने गर्दछ । करेलाको जुस पिउनाले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरुबाट छुटकारा...
मृगौला स्वस्थ राख्न के गर्ने ?
काठमाडौं। प्रत्येक मानिसका शरीरमा मेरुदण्डको दुवैतर्फको मध्य भागमा करङको ठीक मुनि दुई वटा सिमी आकारको अंगहरू हुन्छन्। यिनै अंगलाई मिर्गौला भनिन्छ। मिर्गौलाले २४ घण्टामा करिब २ सय लिटर रगत छान्ने काम गर्दछ।...
काठमाडौ काँक्रो बाह्रै महिना फल्ने एउटा फल हो । यो झालमा फल्ने गर्दछ ।यो स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ । यसको सलाद बनाउदा पनि उतिकै चोपिलो हुन्छ...
न्युयोर्क । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले विश्वव्यापी रुपमा चिन्ता र डिप्रेसनका घटना (केस) बृद्धि भएको जनाएको छ । डिप्रेसन र चिन्ताका घटनामा २५ दशमलब ६ प्रतिशतले बृद्धि भएको संगठनले जनाएको हो ।...
अण्डाको पहेलो र सेतो जुन भाग खाँदा पनि हुन्छ स्वास्थ्यको लागी निकै लाभदायिक
काठमाडौँ- अण्डा हाम्रो स्वास्थ्यको लागी निकै फाइदाजनक छ । प्रोटिन, भिटामिन लगायत बिभिन्न खनिज पदार्थ पाइने अण्डाले हामिले नसोचेको फाइदा गर्छ । एउटा सिङ्गै अण्डामा पाइने आधाभन्दा बढी प्रोटिन यसको सेतो भागमा...
जसलाई पनि हुन सक्छ स्तन क्यान्सर, यस्ता उपाय अपनाए क्यान्सरले गाँच्जु अघि नै बच्न सकिन्छ
काठमाडौँ – स्तन क्यान्सर एक गम्भीर समस्या हो । यो समस्या पश्चिमी देशका महिलामा बढी मात्रामा देखिएको छ । एक अध्ययनअनुसार औसत ४७ वर्षको उमेरमा स्तन क्यान्सर हुने गरेको छ । स्तन...